ग्लाइकोलिक एसिड संग रासायनिक छीलने एक फैशनेबल छ, र छाला को प्रक्रिया को लागि धेरै उपयोगी। यस एसिडको पुनर्जन्म गुणहरू अन्तिम शताब्दीको बीचमा जान्छन् र लगभग एकै समयमा सक्रिय रूपमा अमेरिका र यूरोपमा कस्मेटोलोजीमा प्रयोग गरिन्छ। रूसमा, ग्ल्याकोलिक एसिड अपेक्षाकृत हालै प्रयोग गरिन्छ। यो अङ्गुरको हरियाली र चुकुरीमा पाइएको ठूलो मात्रामा छ।
कस्मेटोलोजीमा ग्ल्याकोलिक एसिडको आवेदनको सम्पूर्ण अवधिमा, यस किसिमको रासायनिक पछाडिको फाइदा, हानिकारक र भेदभावमा धेरै अनुसन्धान गरिएको छ। उनीहरूले धेरै प्रक्रिया पछि पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, र जब ग्लिसकोलिक एसिड 3-6 महिनाको लागि प्रयोग गरिन्छ भने महत्वपूर्ण सुधारहरू उल्लेखनीय छन्: राम्रो झुर्राहरू गायब हुन्छन्, गहिरो कम हुन्छ र रङ्गित भएका क्षेत्रहरू हल्का हुन्छन्।
ग्लिसकोलिक अनुहार छरेर छालाका कोशिकाहरु को कटिटीकरण को कम गर्दछ, छाला को नमीकृत गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो एसिड एक उत्कृष्ट एंटीऑक्सिडेंट हो र एक विरोधी भ्रामक प्रभाव हो। यसको अतिरिक्त, ग्लाइकोलिक एसिड छीले छाला को कोशिकाहरुमा कोलेजन र ग्लाइकोओमिनोगोगिसन को संश्लेषण लाई बढावा गर्दछ, जसमा बदले मा छाला, लोच, र झुर्रियां को बहाल गर्न मा मदद गर्दछ। र अझै यो एसिडले सक्रिय पदार्थहरूलाई छालाको गहिरो तहमा टाँस्न मद्दत पुर्याउँछ, त्यसैले यो छलिले सम्पूर्ण छालालाई असर गर्छ र न केवल यसको सतहमा।
ग्ल्याकोलिक एसिडको अर्को महत्त्वपूर्ण गुण भनेको यसले पेरोक्सिडेसनको प्रक्रियालाई रोक्छ। यस ग्लिसकोलिक एसिड पेलिंगको लागि धन्यवाद सौर गतिविधिको समयमा, चिन्ता वा वृद्धिको खतरा बिना डर लाग्न सक्छ। यसबाहेक, यो अवधिको दौरान, यो कस्मेटिक प्रक्रियाको आचरण पनि सिफारिस गरिएको छ, विशेषगरि यदि वृद्धिको वर्णक पहिले देखि नै हुन्छ।
रासायनिक पिरोली ग्लिककोलिक एसिडको प्रयोग पछि, पुनर्वासको लागि कुनै पनि आवश्यकता छैन, त्यहाँ जलन छैन वा छालाको छाला, जस्तै यो कहिलेकाहीँ अन्य रासायनिक खुट्टा पछि हुन्छ। यसको अतिरिक्त, यो प्रकार को छीने सबै छाला प्रकार को लागि उपयुक्त छ। धेरै अन्य कस्मेटिक उत्पादनहरूको विपरीत, ग्लाइकोलिक एसिडसँग कुनै उमेर सीमाहरू छैनन् र युवा छालाको लागि पनि उपयुक्त छ।
तथापि, ग्लाइकोलिक एसिड प्रयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य अझै छालाको कायाकल्प छ। ग्ल्याकोलिक एसिडको साथ छाँटकाँट एपिडर्मिसको माथिल्लो तहको नवीकरणलाई बढावा दिन्छ, क्षतिग्रस्त सेलहरू पुनःस्थापित हुन्छन्। त्यहाँ ग्लिसकोलिक एसिड र छालाको लोचदार फाइबरको संपीडनको कारण राम्रो लिफ्ट प्रभाव छ।
Glycolic एसिड छीलने को उपयोग को लागि संकेत:
- असामान्य छाला;
- वृद्धि गरिएको वर्णक।
पहिले नै धेरै पछाडि सत्रहरू उल्लेखनीय सुधारहरू दृश्यात्मक छन्: छाला चिसो हुन्छ, राम्रो झुर्राहरूको मात्रा घटाउँछ, छाला कडा हुन्छ। तर नबिर्सनुहोस् र विरोधाभासहरू। यसले सक्रिय चरणमा सबै छाला रोगहरू समावेश गर्दछ, जसमा हेपेस, क्रोनिक डिसोटोसहरू र तीव्र मुँहासे, हाइपरसेन्टिटिभेसिटी, औषधिका घटकहरूमा एलर्जी प्रतिक्रिया, ताजा छाला चोटहरू समेत।
ग्लिकिकलिक एसिडको पहिलो प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले, एलर्जी प्रतिक्रियाको लागि परीक्षण गर्न अनिवार्य छ।
प्रायः प्राय: रासायनिक छाला सैलूनमा गरिन्छ, तर कहिलेकाहिँ घरमा एक एसिड पिरोलिन्छ। नकारात्मक नतिजा नगर्ने क्रममा केही बिन्दुहरू खातामा लिन महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, यो सम्झना महत्वपूर्ण छ कि सैलून तयारीहरू घरहरूमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। घरको प्रयोगको लागि पैसा खरिद गर्न आवश्यक छ। दोस्रो, यो मनमा जन्मेको हुनुपर्छ कि छाला पछाडि पछि पतला हुन्छ, छालाको सुरक्षात्मक गुण कम हुन्छ। यसैले, ब्लैकहेड्स को सम्भावित वृद्धि पछि सम्भव छ। केहि दंत चिकित्सकहरु एसिड छीलने को लागी विशेष क्रीम को लागू गर्नु भन्दा पहिले र पछि सल्लाह दि्छ।
दही को अनुहार मास्क - सबै भन्दा राम्रो समाधान सबै प्रकार को छाला को लागि
टेनिंग लागि राम्रो एजेन्ट कसरी चयन गर्न
आँखाको वरिपरि गोज़ पामहरू: कसरी घर सफा गर्न सकिन्छ। हाइयलरोनिक एसिड र कोलेजनसँग क्रीम
"GapenoFarm" बाट पसीना र गन्धबाट फुस्की। चिन्ताबाट "डेओ नियन्त्रण"
कसरी एक कार्बोरेटर "ओजोन"?
अश्वशक्ति मंडप g6: को BIOS कसरी प्रवेश गर्न र यसले के गर्छ?
यो Daniyar नाम के फरक छ? यसको विशेषताहरु
जहाँ "Windows 7", "रन" लुकाइएको?